Tsy mino an-dRamino ny vahoaka Malagasy ! – MyDago.com aime Madagascar
Araka ny angom-baovao azo tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany, dia fantatra fa tsy hisy hetsika amin’ny Zoma ho avy izao noho ny antony fitandroana ny filaminana.Ankoatra izay dia maro ireo nifandimby nandray fitenenana teo an-kianja.I Tsianihy, solontenan’ny faritra atsimo, dia nanambara fa loho sy mpamono olona ny sambon’i Andry Rajoelina ka fady ny hiditra ao anatiny hoy Tsianihy. Nanakiana mafy an’ny raiamandreny mijoro izy, “Jiolahimboto politika ary tsy mendrika ho raiamandreny I Ramino Paul” hoy izy. Nohamafisiny fa tsy fisokafana no ilaina fa fandravana ny
Ny solombavambahoaka voafidy tany Faratsiho kosa indray dia nanamafy fa tamin’ny 12 Aogositra 2009 i Edem KODJO no niteny fa tsy mitombona ny fiampangana ny filoha Ravalomanana satria fahefana tsy mahefa no nanapaka, izany no mampisahotaka ny FAT rehefa nivoaka ny tapaka Sandton satria mihasarotra ny raharaha ka nanam-pakevitra hanao sonia haingana. Ny fanapakevitry ny fianakaviambe iraisam-pirenena koa dia tsy miova hatramin’ny tapaka voalohany fa ny mpitsompitsony no miova ka dia ampisehoana fa tena tsy milamina tokoa ny tany hoy Randrianjatovop Henri.Grenady etsy grenady eroa nefa tsy adala ilay vahoaka ary na ny faritra tsy dia mahazo vaovao aza, efa miandry fatratra ny fiverenan’i Ravalomanana ny Malagasy hoy izy.
I Rakotomanjato Rodin Edmond indray kosa dia nanoritsoritra fa tsy mahalala fa AVI i Ramino Paul ary mpiandry sy mpivavaka ao amin’ny Nestor no namaky ministera. Salamao foana ny resaka ary aiza ireto masoivoho, i Maorisy fahavalo aza tsy tany fa ambasadoaro itinérant no mba tany.Tongadia akanjo volomboasary anaovana fa tsy mendrika ilay loko tanala.
Inona no vokatra ilay ultimatum ? Tsy loza ve ? Ilay mpianatra indray no mandrahoana mpampianatra.
I Mektoub kosa indray dia nilaza fa misarangotra amin’ny zavatra azo sarongotana ny FAT nefa sady tsy mahay milomano no tsy mahay manao “gilet de sauvetage.”
Diso ilay fandraisantsika ilay « amendée », nasiana fanovana ilay izy fa tsy nasiana fanitsina. Zaitra tena tsara ilay Sandton ary zaitra ratsy rafitra no nataon’i Salamao, io no nodinihan’ny raiamandreny mijoro ary tsy neken’ny V6. Ny V6 dia manadio tena sy anarana toy i Saoly. Budget inona no omena anareo ry Ramino Paul ? hoy hatrany izay, amin’ity volana aogositra hifarana ity ? Ary tsy maintsy hanaraka ny tenin’i Salomao ahoana ny Sadc ? Hifanehitra amin’ny mafy ianareo FAT sy Andry hoy izy namarana ny kabariny.
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 août 2011 31 août 2011 Catégories Politique
1 réflexion sur « Tsy mino an-dRamino ny vahoaka Malagasy ! »
Iza moa no hino an-dRamino ka nefa aza Ramino tsy mino ny tenany?
Précédent Article précédent : Tokony hody tsy misy fepetra avokoa ireo sesitany politika hoy ny CNOSC
Suivant Article suivant : La SADC sur la touche, la HAT vient de franchir le point de non-retour